🥇 ▷ Dagaallada Casriga 5: Madoow, hadda waa BILAASH iPhone iyo iPad ✅
Dagaallada Casriga 5: Madoow, hadda waa BILAASH iPhone iyo iPad
Hadda waad ciyaari kartaa Dagaallada Casriga 5: Madoow loogu talagalay iPhone iyo iPad, oo bilaash ah
Cusboonaysiin cusub oo loogu talagalay ciyaarta caanka ah ee Gameloft ee loogu talagalay iPhone iyo iPad ayaa soo gaartay App Store, Dagaal Casri ah 5: Madoow. Cusboonaysiintaan cusub waxaa ku jira horumarro badan oo aan ka heli karno dabaq cusub oo askar ah, heerar cusub iyo fasallo hub ah, qaab cusub oo badan, hadda waxay haysataa taageerada kontaroolada, xulashooyinka cusub ee lagu habeeyo jilayaasha iyo waxyaabo kaloo badan. Waxa ugu fiican waa taas hadda ciyaarta gabi ahaanba waa bilaash. La kulan dhammaan wararka ciyaartan oo hoos ka soo dejiso.
Haddii aad mar hore ciyaartey Dagaallada Casriga 5: Madoow, hadda waxaad noqon doontaa halyeeye
Ku bood ficil taxanaha ugu wanaagsan ee FPS, oo kiciya baarka mar labaad. Abuur Platoon ah, ku dar asxaabtaada oo tijaabi xirfadahaaga shaqsiyeed iyo kooxda ka dhanka ah baararka kale, dhammaantood ciyaarta Dagaallada Casriga 5: Madoowga loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Miyaad ka sii badan tahay qaabka ciyaartoy? Ka dib u gal adduun qarka u saaran fowdo isla markaana ka bax xaaladaha ugu ba’an si aad u soo afjarto raaxo daran oo isku dayaya inuu dunida baabi’iyo.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad ka mid tahay kuwa horay u soo iibsaday arjigaan, isbedelka ku dhaca BILAASH saameyn kuma yeelan doono tamartaada, sida ku dhici doonta ciyaartoy cusub. Tan kaliya maahan, waxaa sidoo kale toos laguuugu dalacsiin doonaa halyeeyada waxaadna heli doontaa:
Tamarta aan xadidnayn ee nolosha.
Saxiixyada dhimashada iyo ruug-caddaa ruug-caddaa ah.
2 toddobaad asagoo adeegsanaya horumarsan.
Maxaa ku cusub nooca 1.2.0 ee Dagaallada Casriga 5
Jirka oo dhulka ku dhaca! Cusboonaysiinta lagu rakibay waxyaabo badan oo cusub oo aadan seegi karin ayaa imaaneysa Dagaalkii Casriga ahaa 5. Kuwaas waxaa ka mid ah waxaad ka heli kartaa waxyaabaha soo socda:
Fasal cusub: Heerka taageerada wuxuu kooxdaada siiyaa taageerada ay u baahan tahay. Sii xirmooyin si aad u bogsato xulafada. U oggolow saaxiibbadaadii inay ku soo laabtaan meeshii ay ku dhinteen. Awooddaada xirfadahaaga iyo hufnaantaada dagaalka.
Hub fara badan: Heer hub dheeri ah fasal kasta. Nooca cusub ee qoryaha mashiinka fudud ee loogu talagalay fasalka taageerada.
Kumbuyuutar cusub oo leh kontorool aag: Qabsii oo difaac aagagga si aad u hesho waxa ugu sarreeya ee natiijada.
Xakamaynta iswaafaqsan: ku raaxayso ciyaarta adigoo isticmaalaya xakamayn caadi ah, ergonomic ama kontorool fidsan.
Astaamayn badan oo dabeecad ah: Hubka daboolida. Maaskaro cusub iyo xirfado. Astaamo cusub shaqsi ahaan iyo platoon. Saxiixyada cusub ee dhimashada.
Soo degso Dagaallada Casriga 5: Madoowga loogu talagalay iPhone iyo iPad
Hadaadan wali haysan dagaal, agility iyo istiraatiijiyad ciyaarta iPhone iyo iPad, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo maraya xiriirinta tooska ah ee soo dejinta, kana socota App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
Dagaal Casri ah 5: Madoow ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 7.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5, iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Jarmal, Shiinees fudud, Shiinaha Shiine, Kuuriyaan, Faransiis, Indooniisiya, Ingiriis, Talyaani, Jabbaan, Boortaqiis, Ruush, Thai, Turki, Carabi.